Posted by ကလိုစေးထူး at 8:31 PM
u right! i'm also 10 times donated blood when i was in Myanmar.But i always went and join with some association and my University. So they gave to me an egg and some juice, some food.But I never ate.
Anyway! after u donate (may be3times,) u know and change ur mind! That's great!
We donated for necessary human, we don't care any other advantages.
This is we call simple donation which is no hope.
Mar 24, 2008, 8:59:00 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ပဲ ...တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ မတက်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် သွေးတိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မဖွံဖြိုးသေးတဲ့ နယ်မြို့ လေးတွေဆိုပိုဆိုးပေါ့ စေတနာသန့် သန့် လှူခဲ့တဲ့ ကောင်ကလေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလဲလေးစားပါတယ်ဗျာ။
*` သန့်စင်သောစိတ်ထားပြီး သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ*
Mar 24, 2008, 9:25:00 PM
very good story!!! BRO
Mar 24, 2008, 11:16:00 PM
ကိုစေးထူးရဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျနော်လည်း သွေးလှူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပို့စ်တခုရေးချင်စိတ်ပေါက်လာပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကို အတူတူဘဲ ပေးလိုက်တယ်။
Mar 25, 2008, 3:23:00 AM
ကောင်းလိုက်တာဗျာ ... ကျွန်တော်လည်း သွေးလှူ ခဲ့ ဖူးတယ် ... သုံးကြိမ်ထဲပါ ...ဘာမှ မယူခဲ့ပါဘူး ... :D
Mar 25, 2008, 7:38:00 AM
မြတ်နိုးလဲ လှူဘူးတယ်။ သွေးအား အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့ အမှန်က မြတ်နိုးက မလှုရမှာဆိုးလို့ ဘုရားစာတွေရွတ်တာ လေ..။
၅ကြိမ်လောက် လှူဘူးတယ်။ ဘာမှ မယူခဲ့ပါဘူး။ ခုလဲ အခွင့်ကြုံရင် လှူချင်သေးတယ်။
Mar 25, 2008, 7:55:00 AM
ကိုစေးထူးရေ...လှူဖို့အခွင့်အရေးရတာရယ်၊ လှူဖို့စေတနာထက်သန်တာရယ်၊ အလှူပစ္စည်းက အသက်ကယ်နိုင်တဲ့သွေးဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့် ဒီထက်မြတ်တဲ့အလှူရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Mar 25, 2008, 8:45:00 AM
Mar 25, 2008, 2:55:00 PM
very nice short story, ko Sayhtoo. :-)
Mar 25, 2008, 8:38:00 PM
အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲသွားတဲ့ စိတ်လေးကို မြင်သာအောင် ရေးထားတာ ထိမိတယ်ဗျာ ။ အရမ်းကောင်းတယ်။
Mar 25, 2008, 10:17:00 PM
ထက်လည်း သွေးလှူချင်တယ်.. လှူနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားမယ်.. ဒါပေမယ့် သိတယ်မလား ခန္ဓာကိုယ်ကလေ လှူမယ့်သူက သွေးပြန်ပေးချင်တဲ့ ကိုယ်မျိုး... အားပြည့်အောင် လုပ်ပြီးရင် သွေးလှူမယ်..
Mar 27, 2008, 6:09:00 AM